10 dagaalyahan oo Mareykan iyo Faransiis ah iyo 100 Ruush ah oo isaga hor yimid dagaalka Ukraine - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized 10 dagaalyahan oo Mareykan iyo Faransiis ah iyo 100 Ruush ah oo...
Members of Ukraine's Territorial Defense Forces, volunteer military units of the Armed Forces, train close to Kyiv, Ukraine, Saturday, Feb. 5, 2022. Hundreds of civilians have been joining Ukraine's army reserves in recent weeks amid fears about Russian invasion. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Subaxdii ay taariikhdu ahayd 21-ka June, warbaahinta dowladda Ruushka ayaa tabiyay in labo muwaadin oo u dhashay Mareykanka, oo kala ah Alexander Dryuke iyo Andy Huynh lagu hayo magaalada Donetsk.
Tani waxa ay ka dhigan tahay in labadaas nin oo ka mid ahaa dagaalyahannada iskood ugu biiray coladada Ukraine ay wajahayaan ciqaab dil toogasho ah, oo ah xukunka ay dowladda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee DRP ugu talogashay calooshood u shaqaystayaasha.
Labada ninba waxaa la sheegay inay kasoo jeedaan gobolka Alabama.
Alexander Dryuka waa 39 jir, halka Andy Hyun uu yahay 27 jir.
Labadooduba waxa ay khibrad u leeyihiin dhinaca militeriga. Druke waxa uu kasoo shaqeeyay Ciraaq markii uu howlgalka militeri ka socday intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2009.
Hyun ayaa isagana ka tirsanaan jiray ciidamada militeriga Mareykanka ee loo yaqaanno Mariiniska. Laakiin waxba lagama yaqaanno dagaallada uu kasoo qayb galay ka hor inta uusan u safrin Ukraine.
Druke hooyadiis ayaa wargayska Britain kasoo baxa ee Telegraph u sheegtay in wiilkeeda uu dhibaato kalasoo kulmay walwalka marxaladihii uu shaqada kasoo maray.
Hadda waxa uu leeyahay xaas iyo carruur. Hyun waxa uu ciidanka ka baxay sanadkii 2018-kii, waxa uuna u muuqdaa in ay noloshiisa wanaagsan tahay shaqadiisa militerinimo kaddib.
Haweeneyda uu guursan rabo ayuu uga soo tagay Mareykanka, waxa uuna lacag dhan $6,000 oo jeebkiisa ah ku bixiyay safarka uu Ukraine ku aaday bishii April ee sanadkan 2022-ka.
Toban Dagaalyahan oo ka hor tagay 100 askari
Lama oga xilliga dhabta ah ee ay Dryuke iyo Hyun billaabeen howlahooda qaybta ka ah dagaalka ka socda Ukraine.
Waxa kaliya ee la ogyahay waa in ay ku biireen koox calooshood u shaqaystayaal ah oo ka kooban dagaalyahanno u badan Mareykan iyo Faransiis.
Kooxdaas dagaalyahannada ah ayaa caalamka looga yaqaannaa magaca “Baguette”.
Xogta intaas sii dheer ayaa laga heli karaa bogga ay kooxdan ku leedahay Twitter-ka iyo hadallo ay sheegeen saaxiibbada Dryuke iyo Hyun magacyadooda qariyay xilli ay la hadlayeen Telegraph iyo qaar ka mid ah warbaahinta kale ee Mareykanka.
Wali waxaan suurtagal ahayn in la helo xog ku saabsan dagaalyahanno badan oo ka tirsanaa kooxda Baguette oo iyagoo ka dagaallamayay gobolka Kharkiv la kulmay xaalad adag oo ay sababtay helitaan la’aanta xogta sirdoonka.
Waxaa loo diray meel ay filayeen in ay daggan tahay wax ciidamo ahna aysan ku sugnayn (inkastoo aan meeshaas la magacaabin).
Hase yeeshee markii ay halkaas gaareen waxay la kulmeen ciidamo Ruush ah oo weerar kusoo qaaday goobtaas.
Qiyaastii 10 dagaalyahan oo kooxda Mareykanka iyo faransiiska u badan ah ayaa dagaalkaas ku wajahay 100 askari oo ka tirsan militeriga Ruushka.
Ciidanka Ruushka ayaa la soo tabiyay in markaas ay wateen labo taangi.
Mid ka mid ah labadii taangi ayaa ku qarxay miino dhulka lagu aasay.
Mid ka mid ah saaxiibbada labada nin ee Mareykanka ah ayaa sheegay in jah wareerkii halkaas ka dhacay ay ku waayeen Andy Huyn iyo Alexander Dryuke.
Markii dambe ayay isku dayeen in ay raadiyaan iyagoo caawinaad ka helaya ciidamo gurmad ah iyo diyaaradaha uusan duuliyaha saarnayn. Laakiin ma aysan ku guulaysanin in ay helaan dagaalyahannada iyo alaabtoodii toona.
15-kii bishan June, sheekadan ayaa kasoo muuqatay wargayska Telegraph iyo bogga Twitter-ka ee kooxda Baguette, iyagoo sheegay in ilaa hadda la la’yahay labada muwaadin ee Mareykanka ah.
Wax yar kaddibna xogtan waxaa xaqiijiyay mas’uuliyiinta Mareykanka.
Previous articleWafdigii madaxweyne xasan shiikh ee iMaaraadka Ku Maqnaa oo la karantiilay
Next articleMadaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo maalmo la la’aa kaddib kulan ka soo muuqday